Mahad Salaad oo is hor istaag ku sameeyay Kullane Jiis | KEYDMEDIA ENGLISH
Mahad Salaad oo is hor istaag ku sameeyay Kullane Jiis
Kullane Jiis oo dadka qaar u yaqaannaan Jiis Mareexaan iyo Cabdishakuur Cali Mire, waxa ay hormuud u ahaayeen Xildhibaanno xalay la diyaariyay kuwaas oo la doonayay in ay maanta fowdo ka dhex sameeyaan xarunta Golaha Shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, ayaa hor istaagay isku day ay Kullane Jiis iyo Cabdishakuur Cali Mire oo Farmaajo ku heyb ah doonayeen in ay ku handadaan Guddoomiyaha KMG ah ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Cabdisalaan Xaaji Axmed [Dhabancad] oo RW Rooble u ku beel ah.
Kullane iyo Cabdishakuur, waxa ay bilaabeen in ay ku buuqaan Guddoomiyaha, markii uu soo xirmay kulankii wadajirka ahaa ee Golayaasha, waxa ay tageen fadhiga Guddoomiyaha si ay u handadaan, hayeeshee, Xildhibaan Mahad ayaa gacanta qabtay Kullane, una sheegay inuu fadhigiisa ku laabto buuqana ka joojiyo Dhamancad.
Taasoo sababtay inuu gacan qaad aan buurneyn dhex maro, Cabdishakuur iyo Mahad Salaad, oo dab iyo baasiin siyaasadeed isku ahaa shanti sano ee la soo dhaafay, waxaana si dirqi u kala dhex galay xildhibaanno goobta taagnaa, waxaa xarunta isaga baxay Guddoomiye Dhamancad, halkaas ayuuna buuqu ku damay.
Kullane Jiis oo dadka qaar u yaqaannaan Jiis Mareexaan iyo Cabdishakuur Cali Mire, waxa ay hormuud u ahaayeen Xildhibaanno xalay la diyaariyay kuwaas oo la doonayay in ay maanta fowdo ka dhex sameeyaan xarunta Golaha Shacabka, si aan loo ansixin ajandaha, hayeeshee, qorshahaas ayay si foolxun ugu fasilmeen.
Tallaabada ay maanta ku dhaqaaqeen shaqsiyaadkii dhanka NISA, ka soo galay Baarlamaanka iyo qaar ka mid ah xubnaha laga soo doortay Koofur galbeed, waxa ay tusaale u yihiin, damaca Farmaajo ee ah in waddanka aysan ka qabsoomin doorasho Madaxweyne, isla-maraakana aan laga bixin fowdo siyaasadeed.
Sidoo kale, isku beeganka madaafiicda ku soo daatay Xarunta Villa Hargeysa iyo buuqa Xildhibaannada Farmaajo taabacsan, waxa ay muujineysa, in kooxda watigu ka dhamaaday aysan wali ka quusan maleegidda falalka amni daarro iyo addeegsiga hubka, si ay danahooda gaarka ah u fushadaan, waana rajo xumo hor leh.